Sydney Apple Chitoro Chadzingwa Nekuda KweBomb Kutyisidzira | IPhone nhau
NeChishanu chapfuura chitoro cheApple chiri mu George Street Sydney, yakakanganiswa nekutyisidzira kwebhomba uye nzvimbo yacho yaifanira kubviswa nekukurumidza nemapurisa eguta. Mukutaura uye mushure memazuva mashoma zvave zvichikwanisika kusimbisa kuti kutyisidzira kwaive nerombo rakanaka ipapo, kutyisidzira kuri nyore. Nhasi uno mhando yenyaya iyi ichiri kuonekwa kutenderera pasirese uye ndezvekuti kwete kare kare chaizvo chinhu chakafanana chakaitika muApple Chitoro muUnited Kingdom, muBirmingham. Pane iyo nguva tyisidziro nerombo rakanaka yakaramba iri mune iyoyo, kutyisidzira futi.
Aya marudzi ezviitiko anofanira kutorwa zvakanyanya Uye zvimwe mushure mekurwiswa kunotyisa kuri kuitwa pasi rose, Apple kana chero imwe kambani, chitoro, nzvimbo yekutengesa nevamwe, tora rudzi urwu rwebhomba kutyisidzira zvakanyanya uye hazvishamise. Apple yagara iine kutyisidzira kwerudzi urwu muzvitoro zvaro zvakati wandei pamwe nezvimwe zvitoro kana mabhizimusi kutenderera pasirese, kunyangwe pane imwe nhambo mugore ra2016 chinhu chakafanana chakaitika kumuzinda wekambani iri kuCork, Ireland.
Panyaya yechitoro cheSydney, kudzingwa nemapurisa kwakakurumidza kana kutyisidzirwa kwagamuchirwa, vese vatengi vaive mukati mechitoro, vashandi ipapo nenzvimbo iri padyo nechitoro vakadzingwa uye vakavharwa. kusvikira zvasimbiswa kuti pakanga pasina mukana wekuputika. Chero zvazvingaitika, neChishanu masikati kubva pa13: 36 pm kusvika 13:50 pm nguva yemuno muSydney, chitoro chakakanganiswa nechiitiko ichi asi nhasi zvese zvave nyore anecdote. Chero zvazvingaitika, zviremera zvakavhura kuferefeta kuti vawane avo vane mhosva yekutyisidzira uku.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Sydney Apple Chitoro chakadzingwa nekuda kwekutyisidzira kwebhomba
Dhawunorodha akanyanya kupenya mapikicha eWWDC17